Fros Suu Blog Entry `ဂိမ်းစဆော့မယ့်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့` | FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
Final Fantasy 14 ဂိမ်းအကြောင်း သိသလောက် ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ပါ ။ စတင်ဆော့မယ့်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ Wrote with Zawgyi Font and Unicode Font.
Final Fantasy 14 ဟာ PC, PS4 ဂိမ်းဖြစ်ပြီး World of Warcraft နဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့အချက်က PC, PS4 cross-play ရတာရယ် character တကောင်တည်းနဲ့ class ၁၈ ခု ကိုင်လို့ရတာရယ် ပါပဲ ။
နောက်တခု ထူးခြားတာက ဂိမ်းထဲမှာ လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပလို့ရတာပါပဲ ။ :3 လက်ထပ်လက်စွပ်နဲ့ မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားနဲ့ လူတွေဖိတ်ပြီး တခမ်းတနား ကျင်းပလို့ရတာ ဖြစ်တယ် ။
ဒါကတော့ Final Fantasy 14 ဂိမ်းအကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပြီး ဘယ်လိုဝယ်ရလဲ? ဂိမ်းဘယ်လိုရှိလဲ? ဘာနဲ့ဝယ်ရလဲ ဆိုတာတွေပါ သိသလောက် ရှင်းပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်
Final Fantasy 14 မှာ အရမ်းကောင်းတဲ့တချက်က character တကောင်တည်းမှာ class ၁၈ မျိုးလောက် ပြောင်းပြီး ဆော့လို့ရတာပဲ။ အဲ့ class တွေက အချိန်မရွေး ပြောင်းပြီး ဆော့လို့ရတာနော။ အခု link ကတော့ အဲ့ဒီ class တွေအကြောင်း ရှင်းပြထားတဲ့ ပို့စ်ပါ
အကောင့်ဖောက်ပြီးပြီ စဆော့တော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဂိမ်းထဲ စဝင်ရင် တွေ့ရမယ့် အခြေအနေကို ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြပေးပါတယ် ။
လစဉ်ကြေးပေးရတဲ့ဂိမ်းမှာ အချိန်ကို ဘယ်လိုတွက်ကြတာလဲ ဆိုတာ သိထားရင် ကိုယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်မှာပါ ။ ဒီပို့စ်ကတော့ အချိန်ဘယ်လိုတွက်ကြတာလဲ? မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ဆို ဘယ်လောက်ကွာလဲ? ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးထားတဲ့ ပို့စ်ပါ
ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အထောက်အကူ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။